Cameron.....: August 2010
Posted by Cameron at 16:006comments:
“အိန်ဂျယ်....ရယ် မင်း...အလွမ်းတွေကို ဖြေချလိုက်ပါတော့..
ဟော!!!! ဟိုးးး ပြာမှိုင်းနေတဲ့ တောင်ထိပ်ဆီက
နဂိုထဲကမှ ဗလာရင်ဘတ်ကို.....။ ။
Posted by Cameron at 15:14 8 comments:
ဟန်နီ....ရင်ကို သူဖမ်းစားခဲ့တာကြာပြီ ရုန်းထွက်ဖို့ စိတ်ကူးလည်းမရှိ အိုး...နိုး
ဟန်နီ...နင်လေ ငါ့အနားရှိတုန်းမှာ မမြင်မိ နင်ထွက်သွားမှ ငါ့စိတ်တွေလေပြီ
(အိမ်မက်က နိူးထခဲ့တာ အချိန်တွေနှောင်းသွားပြီလား)
(ဟန်နီ....လုံးဝ လုံးဝမမေ့လိုက်နဲ့ အိုး...နောက်ဆုံးချစ်ခွင့် မရှိရင်တောင်
ငါ့ကိုတော့ မမုန်းလိုက်နဲ့ဦး ဒီအတိုင်းလေး နေပေးနော်)
ဟန်နီ... ရင်မှာ မျှော်လင့်ခဲ့ အချစ်တွေကြာပြီ
သူပေးမယ့် အချစ်အနမ်းလေး တို့စောင့်နေ
ဟန်နီ...ချိုမြိန်တဲ့ နေ့သစ်ထဲ ပြန်ဆုံချိန် ဟိုအရင်အတိတ်က အမှားတွေပြင်ပြီး
(အိမ်မက်က နိူးထခဲ့တာ အချိန်တွေ နှောင်းသွားပြီလား)
ဟန်နီ...... ဟူး... ဟူးး...ဟူးးး.... ဟန်နီ.....ဟူးး ဟူးး ဟူးး
Fade away .......
ကျမဆီကို အစ်ကိုတစ်ယောက်ပို့ပေးခဲ့တဲ့ သီချင်းလေးပါ...။ လင်းနစ်သီချင်းကို တစ်ပုဒ်စ နှစ်ပုဒ်စ နားထောင်ဖူးပေမယ့်... ဘယ်စီးရီး ဘာသီချင်းခေါင်းစဉ်လဲဆိုတာ တွဲမမှတ်ထားဖူးဘူး...။ ဒီတစ်ပုဒ်ကိုတော့ ခေါင်းစဉ်လေးကိုစတွေ့ကတည်းက ကြိုက်သွားတာ...။ သေချာနားထောင်ကြည့်တော့လည်း ကောင်းတယ်...။ လင်းနစ်ရဲ့ ဆိုသံဆိုပေါက်မပွင့်တစ်ပွင့်ရယ်.... သူ့ချစ်သူကောင်မလေးကို ခပ်ချွဲချွဲလေး တောင်းဆိုပုံလေးတွေက သိပ်ကိုချစ်ဖို့ကောင်းလွန်းလို့ စာလာဖတ်သူတွေကိုဝေမျှချင်သွားတာနဲ့ ဒီပို့စ်လေးရေးဖြစ်သွားတာပါ...။ “ဟန်နီ”ဆိုတဲ့ စကာလုံးလေးနဲ့ သီချင်းလေးမစခင်မှာ.... Lead လေးနဲ့ ခပ်အီအီလေး intro ၀င်ထားတာနဲ့ လင်းနစ်အသံလေးက အတွဲအဖက် သိပ်လှပါတယ်...။ စာသားလေးတွေက ရိုးစင်းသလို သီချင်းလေးကလဲ တစ်ပုဒ်လုံးခပ်အေးအေးပါပဲ....။ သီချင်းလေးကို ခံစားနားဆင်ကြည့်စေချင်ပေမယ့်...upload လုပ်တာ ဘယ်လိုမှ အဆင်မပြေဘူးဖြစ်နေတယ်....။ အားနာပါတယ် သီချင်းလေးကို ဒီပို့စ်လေးနဲ့တွဲပြီး နားထောင်စေချင်တာပါ... တကယ်။
Posted by Cameron at 17:116comments:
၀ယ်လာတဲ့ မုန်ညင်းချဉ်ကို ရေစင်စင်ဆေးပြ်ီး ခပ်သေးသေးလှီးထားပါ...။ ဆီပူပူဒယ်အိုးထဲကို ပါးပါးလှီးထားတဲ့ ကြက်သွန်ဖြူတစ်လုံး၊ ကြက်သွန်ဖြူးဓါးပြားရိုက်၊ ဂျင်းကိုအချောင်းချောင်းလေးတွေလှီးထားတာကို တစ်ခါတည်းထည့်ကြော် မွှေးလာရင် ကြိတ်ထားပြီးသားကြက်သားထည့် ကြက်သား ပဲငံပြာရည်အကြည်ထည့် ကြက်သားရွှေရောင်သန်းလာရင် ခရမ်းချဉ်သီးလှီးထားတာထည့် ငရုတ်သီးစိမ်းထည့် ခရမ်းချဉ်သီးလိတ် လာရင်တာ့ မုန်ညင်းချဉ်ထည့်ပြီး ဆား၊ သကြားလိုသလိုထည့် ...။ အရသာချိုချိုချဉ်ချဉ်နဲ့ ထမင်းစားမှိန်လိုက်မယ့်ဖြစ်ခြင်း....။ (ကြိတ်ထားတဲ့ ကြက်သားထဲ အရသာရှိအောင် ငရုတ်ကောင်း၊ ကြက်သားမှုန့်၊ ပြောင်းမှုန့်နဲ့ ဆီအနည်းငယ်ထည့်ပြီး နယ်ထားပါ)
ရေဆူဆူထဲမှာ ကြက်သားမှုန့်အခဲလေးတစ်တုံးထည့် ပြီးတော့ ကြက်သွန်ဖြူသုံးမွှာလောက်အပြားရိုက်ထည့်...။ အတုံးတုံးလေးတွေလှီးထားတဲ့ ခရမ်းချဉ်သီး၊ ခါဂျက်ဥနီ၊ ဂျပန်တိုဖူးပျော့တွေကို တပြိုင်နက်ထဲထည့်လိုက်ပါ...။ ဆယ်မိနစ်လောက်ဆက်တည်ထားပြီး သောက်ခါနီး ငရုတ်ကောင်းမှုန့်ဖြူးလိုက်ရင်... အဟာရဟင်းရည် တစ်ခွက်ရပါပြီ...။ ကြက်ဥကြိုက်ရင်လဲ ဖောက်ထည့်လို့ရပါသေးတယ်...။
Posted by Cameron at 14:18 8 comments:
သိပ်ကောင်းတဲ့ စာအုပ်တစ်အုပ်ပါ... ။ ခုတလော စာအုပ်တွေနဲ့ပဲ အချိန်ဖြုန်းမိတယ်....။ သိပ်အားတယ်လို့တော့မဟုတ်ဘူးပေါ့..။ ညဘက်...အင်တာနက်နဲ့ နည်းနည်းခပ်ကင်းကင်းနေပြီး... စာအုပ်တွေဖတ်ဖြစ်နေတာပါ..။ ဒီ“နောင်တကင်းရာသို့” ဆိုတဲ့စာအုပ်လေးကပြီးခဲ့တဲ့ ကျမမွေးနေ့တုန်းက ညီမလေးဆုမြတ်မွန်ဆီက လက်ဆောင်ရထားတာ...။ သူပေးတဲ့လက်ဆောင်က ဒီစာအုပ်လေးရယ်.. ပန်းချီဆွဲတဲ့ စာအုပ်တွေ...ရောင်စုံခဲတွေနဲ့ ကိရိယာစုံပါတယ်...။ ဆုမြတ်မွန်က ကျမလက်ရာပန်းချီတွေကို မျှော်လင့်တယ်ထင်ပါ့..။ ကျမမှ ပန်းချီမရေးတတ်တာဘဲ... ဒီတော့ အသုံးဝင်မယ့်ကလေးတွေအတွက် ကျမပြန်လှူလိုက်တယ်...။ ညီမကျေနပ်လိမ့်မယ်ထင်ပါတယ်..။
ကျမတို့ စာအုပ်အကြောင်းလေး စပြောရအောင်...။ ဦးစွာ ဆရာနန္ဒာသိန်းဇံရဲ့ နောင်ကင်းရာဆီသို့ ဆိုတဲ့စာအုပ်ကာဗာပန်းချီကိုပြောချင်ပါတယ်...။ ကိုနေမျိုးဆေးရဲ့ လက်ရာပါ..။ ဆရာ့ဆောင်းပါးတွေက နောင်တအကြောင်းတွေရေးထားတာဆိုတော့.. နောင်တကို ဘယ်လိုပုံဖော်ရင်ကောင်းမလဲလို့ ပထမသူစဉ်းစားမိတယ်...။ နောင်တဆိုတာ ကိုယ်လုပ်ခဲ့တဲ့ အမှုရဲ့ အကျိုးဆက်ဆိုတော့ မကောင်းတဲ့ အရာပဲဆိုပြီး ညိုမဲမဲ ခပ်ကြမ်းကြမ်းစုတ်ချက်တွေနဲ့ရေးလိုက်ရင်ကောင်းမယ်ဆိုပြီး သူစဉ်းစားမိတယ်တဲ့...။ နောက်ထပ်စဉ်းစားမိတာက နောင်တဆိုတာ ဘာပဲပြောပြောကိုယ်အမှားလုပ်ခဲ့မိတာကို ပြန်ပြီးဆင်ခြင် သတိကပ်တာလဲ ဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုပြီး... အကောင်းဘက်က မြင်ပြီး အဲဒီစုတ်ချက်မဲမဲတွေပေါ်မှာ အဖြူရောင်ပန်းခက်တွေ ဆွဲမယ်လို့ စိတ်ကူးပြီး နောင်တကို ပုံဖော်လိုက်ပါတယ်တဲ့ဗျာ...။
ဒီစာအုပ်လေးက... အင်တာဗျူးဂျာနယ်၊ phoenix ဂျာနယ်၊ ရုပ်ရှင်မမြုတေမဂ္ဂဇင်း၊ ပိတောက်ပွင့်မဂ္ဂဇင်း၊ ဓမ္မရိပ်မဂ္ဂဇင်း၊ Perfect မဂ္ဂဇင်းတို့မှာ ဆရာရေးသားခဲ့တဲ့ စာစုတွေကို တစ်စုတစ်စည်းထဲဖြစ်အောင် စာအုပ်အဖြစ်ပြန်လည် ထုတ်ဝေထားတာပါ...။ မာတိကာမှာ အကြောင်းအရာအားဖြင့် ၁၆ခုပါပါတယ်...။ အဲဒီခေါင်းစဉ် ဆယ့်ခြောက်ခုမှာ ဆရာရဲ့ အတွေးအမြင်တွေဘယ်လောက် အနှစ်သာရရှိတယ်ဆိုတာကို ကျမဖတ်မှတ်ထားတာလေးတွေကို ပြောပြချင်ပေမယ့်....ပြောပြစရာတွေက သိပ်များနေလို့ နောက်ပို့စ်တွေမှာပဲ ခေါင်းစဉ်တစ်ခုအနေနဲ့...ရေးသားဖော်ပြပေးပါ့မယ်...။ စာအုပ်လေးက အခင်းအကျင်းလဲလှတယ်...။ ခေါင်းစဉ်အခုတိုင်းမှာ ကိုနေမျိုးဆေးရဲ့ မဲနက်တဲ့ စုတ်ချက်ကြမ်းတွေပေါ်မှာ အဖြူရောင်ပန်းပွင့် ပုံစံမျိုးစုံတွေ့ရပါတယ်...။
ဆရာမဂျူးရဲ့ “အမှတ်တရ” ဆိုတဲ့စာအုပ်....။ ပန်းရောင်အဖုံးနဲ့က အဟောင်းတန်းမှာ ၀ယ်ထားတဲ့ ကော်ပီ၊ အနီရောင်အဖုံးနဲ့က ခုနောက်ဆုံးပြန်ထုတ်ထားတဲ့ “အမှတ်တရ”... မွေးနေ့တုန်းက မောင်လေးတစ်ယောက် ပေးထားတဲ့ လက်ဆောင်...။ နောက်တစ်အုပ်က ညီမလေးကို ဆရာမလက်မှတ်ထိုးပေးထားတဲ့ စာအုပ်လေးပါ....။ ကျမဆီမှာ အားလုံးသုံးအုပ်ဖြစ်သွားတယ်...။ ညီမလေးသဲသဲရဲ့ နာမည်ကိုတောင်ဆရာမက သဘောကျလို့ နောက်ထုတ်မယ့်လုံးချင်းတွေမှာ သုံးချင်တယ်လို့ပြောသွားပါသေးတယ်....။ နောက်တာလဲဖြစ်နိုင်ပါတယ်...။ ဆရာမရဲ့ ပထမဦးဆုံးလုံးချင်းတစ်အုပ်ဖြစ်ပြီး ဒီစာအုပ်ကို ကျမခုနှစ်တန်းနှစ်ကတည်းက စဖတ်ဖူးတာပါ...။ ဒါပေမယ့် အဲဒီတုန်းကဖတ်ထားတဲ့ ခံစားနားလည်မှုနဲ့ ခုနဲ့တော့ ကွာခြားသွားပြီပေါ့...။ ဒီစာအုပ်လေး စထွက်တော့ ဝေဖန်ရေးဆရာတွေရဲ့ တိုက်ခိုက်မှုကို အတော်ခံခဲ့ရတယ်လို့ ကြားဖူးခဲ့တယ်...။ အဲဒီခေတ်ကနဲ့မညီတဲ့ အရေးအသားတွေ ဇာတ်အိမ်တွေဖြစ်နေလို့....လို့ပြောကြပါတယ်...။ ကျမကတော့ ဂျူးရေးသမျှစာအုပ်အကုန်ကြိုက်တယ်...တော်တော်များများလဲ ၀ယ်စုထားဖြစ်တယ်...။ ဆရာမရေးတဲ့ စာအုပ်တိုင်းက မှတ်သားစရာ ပညာယူစရာတွေအမြဲ စွဲတင်ကျန်ရစ်စေတာချည်းပဲ...။ စာဖတ်ပရိတ်သတ်တွေကို မသိတာလေးတွေ အမြဲပေးတတ်တာမို့... နှစ်သက်မိတယ်...။
စာအုပ်အမျိုးအစားထဲမှာဆို ဘိုင်အိုဂရပ်ဖီလိုစာအုပ်မျိုးလည်း ကျမသိပ်ကြိုက်တယ်....။ လူတစ်ယောက်ရဲ့ ရာဇ၀င်အကြောင်းကိုဖတ်ရတာ စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်ဗျ...။ သူဘာတွေလုပ်ခဲ့လို့ ခုလို ရာဇ၀င်မှာ ထင်ကျန်ရစ်သလဲဆိုတာကိုက စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းနေတာ...။ ပုဂံရာဇ၀င်မှာ ကျန်စစ်မင်းအကြောင်း ရေးတဲ့ စာရေးဆရာတွေ ခပ်များများရယ်...။ ခေါင်စဉ်အမျိုးမျိုးအဖုံဖုံနဲ့ ဆောင်းပါး၊ ၀တ္ထု စသဖြင့်ရေးနေကြတာ...။ အရင်တုန်းက ဆရာချစ်ဦးညိုရေးတဲ့ “မဏိစန္ဒာဥဒါန်း” ဆိုတာဖတ်ဖူးတယ်...။ အဲဒါလေးကတော ဇာတ်လမ်းလေးဆင်ပြီးရေးထားတာ...။ အတ္ထုပ္ပတ္တိပုံစံမျိုးမဟုတ်ဘူး...။ နောက်ပုဂံရာဇ၀င်မှ သူရဲကောင်းများဆိုပြီးလဲ ထွက်တာပဲ...။ တော်တော်များပါတယ်...။ ခုကတော့ ဆရာမ ဒေါက်တာမတင်ဝင်းရေးတဲ့ “မင်းကျန်စစ်ကို ချစ်တဲ့ သူများ”ဆိုတဲ့ စာအုပ်ကျတော့.... ဆောင်ပါးမကျ... ၀တ္ထုမကျ ပုံစံလေးနဲ့ပါ...။ ဆရာမက ၀တ္ထုရေးနေကျမဟုတ်လို့... ၀တ္ထုတစ်ပုဒ်အနေနဲ့မရေးဘဲ... ကျန်စစ်သားအကြောင်းကို ပြန်ပြောပြတဲ့ စကားပြေဆန်ဆန်မျိုးလေးရေးထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်...။ အဲဒီမှာ ရာဇကုမာရ်နဲ့ သမ္ဘူလတို့သားအမိ စကားအပြန်အလှန်ပြောတဲ့ ဒိုင်ယာလော့လေးတွေကိုလည်း တွေ့ရတယ်...။ မင်းကျန်စစ်ကိုချစ်တဲ့ သူများဖြစ်ကြတဲ့... အနော်ရထာ၊ မဏိစန္ဒာ၊ အပယ်ရတနာ၊ ရာဇကုမာရ်ခေါ် ဇေယျခေတ္တရာ၊ သမ္ဘူလမိဖုရား၊ ခင်တန် စတဲ့သူတွေနဲ့ ခေါင်းစည်းတစ်ခုစီခွဲပြီးရေးထားပါတယ်...။ မဟာမဂ္ဂဇင်းမှာ ဆရာမရေးခဲ့ဖူးတဲ့ ကျန်စစ်မင်းနဲ့ ပတ်သက်ဆက်နွယ်ချစ်ခင်ခဲ့ကြသူတွေရဲ့ တစ်ဦးချင်း အကြောင်းအရာတွေကို စုစည်းထားတာပါ ဒီစာအုပ်လေးမှာ...။
Posted by Cameron at 10:475comments:
Posted by Cameron at 20:039comments:
ကျနော့်ဘ၀မှာ ကံကြမ္မာက.... အမှတ်မထင်... ကစားပွဲတစ်ခုကို ဖန်တီးပေးခဲ့ဖူးတယ်....။ ကစားပွဲ လို့သုံးရခြင်းအကြောင်းအရင်းက .... အဲဒ်ီချာတိတ်မလေး အမြဲသုံးစွဲနေကျ တိတိကျကျပြောရရင် ကျနော့်ကိုသူစွပ်စွဲနေကျ စကားလုံးလေးပါ...။ ကျနော်တကယ်သူ့ကို ကျနော့်ရဲ့စိတ်ဖြေဖျောက်မှုအတွက် အပျင်းပြေအတွက် ကစားခဲ့ဖူးသလားဆိုတာ ခုချိန်ထိ ကိုယ့်ကိုယ်ကို သေချာမသိဘူးလို့ဆိုရင် ခင်ဗျားတို့ ကျနော့်ကို တော်တော် အတ္တကြီးပြီး တစ်ကိုယ်ကောင်းဆန်သူလို့ မြင်လိမ့်မှာပါ...။ အိုကေ...ဒါဟာ လူနှစ်ယောက်ကြားမှာ ယေဘူယျအားဖြင့် အချိန်မရွေးဖြစ်ပျက်သွားနိုင်တဲ့ ကိစ္စပါ..။
ဒီလိုပါ... ကျနော်အရင်က အင်တာနက်မသုံးဖူးပါဘူး....။ ကျနော့်မိတ်ဆွေတချို့က ခင်ဗျားဂျီမေးလ်လေး ဖွင့်ထားပါလား ဒါဆို ခင်ဗျားအလုပ်အတွက်လည်းအဆင်ပြေတာပေါ့လို့ အကြံပေးခဲ့ပါတယ်...။ ဒါနဲ့ ကျနော့်ညီတစ်ယောက်က အကောင့်ဖွင့်ပေးပါတယ်...။ ကျနော်တို့ခေတ်နဲ့ ခုခေတ်ကလေးတွေက သိပ်ကိုကွာခြားသွားပြီလေ...။ Generation Gap ဆိုတာကိုမဖြစ်အောင် ကျနော် အမီလိုက်ဖို့လိုမယ်ထင်တယ်...။ လုပ်ငန်းအတွက်လည်းသွင်ကျယ်မယ် နိုင်ငံခြားအဆက်အသွယ် လည်းလွယ်ကူမယ်ပေါ့ဗျာ...။ ကျနော်နေထိုင်တဲ့မြို့နယ်မှာလည်း ရန်ကုန်မှာ အင်တာနက်ဆိုင်အများဆုံးရှိတဲ့နေရာ....။ ဆိုင်သွားလိုက်ရင် ကလေးတွေချည်းသုံးနေကျတာ နောက်မိုက်တွေဘာတွေတပ်ပြီး စကားပြောကြတယ် တချို့က သမီးရည်းစားတိုးတိုး တိုးတိုးနဲ့ပြောနေကြသလို တချို့ကျတော့လဲ တဆိုင်လုံးမကြားချင်အဆုံး အော်ကြီးဟစ်ကျယ်နဲ့ တချို့မိန်းမတွေက နိုင်ငံခြားရောက်နေတဲ့ သူတို့ ခင်ပွန်းသည်တွေဆီကို ငွေလှမ်းတောင်းမရရင် ရန်ဖြစ်တာကလည်းရှိသေး...။ အစပိုင်းတော့ ကျနော့်အတွက် ဆိုင်မှာသုံးရတာ လုံးဝကို အဆင်မပြေဘူးဗျာ...။ ကျနော်က အေးအေးဆိတ်ဆိတ်ငြိမ်ငြိမ်မှကြိုက်တာ... အာရုံနောက်တဲ့ နေရာတွေဆို စုစည်းမှုအားနည်းတယ်...။ ပြီးတော့ ဂျီမေးလ်ဆိုတာတောင် ခုမှစသုံးတာ သူတို့ပြောနေကြတဲ့ ဂျီတော့ဆိုတာလည်း မသုံးတတ်ဘူး...။
နောက်မှ ရုံးက လုပ်ဖော်ကိုင်ဘက်တွေပြောပြတော့မှ ဘယ်လိုသုံးရသလဲဆိုတာ နည်းနည်း သိလာတယ်...။ ကျနော်...ဆိုင်မှာသုံးတဲ့ တစ်ညမှာပဲ... လိပ်စာတစ်ခု ကျနော့်ကို invite လုပ်လာတယ်...။ ဒါသူကိုယ်နဲ့ သူငယ်ချင်းဖြစ်ချင်လို့ပေါ့...ကျနော် မျက်ခုံးပင့်မိသွားတယ် ငါ့ကို မိတ်ဖွဲ့တဲ့သူရှိပါလားပေါ့ သူနဲ့ကိုယ်နဲ့လဲ တစ်ခါမှ မသိမမြင်ဖူးဘဲနဲ့လေ။ ပထမဆုံး ဖိတ်ခေါ်ခံရတော့ နည်းနည်းတော့ ရင်ခုန်သွားတယ်ဗျာ...။ ဆယ်ငါးနှစ်သားတစ်ယောက်လို ကျနော် စိတ်လှုပ်ရှားသွားတာအမှန်ပဲ...။ ဒါတောင် ကိုယ့်ကိုဖိတ်လာတဲ့သူက ယောက်ကျားလား မိန်းမလား မသိသေးဘူး...။ လိပ်စာလေးကိုကြည့်တော့ မြို့နာမည်အတိုကောက်ကလေး ပါလာတယ်...။ ဒါနဲ့ အဲဒီမြို့မှာ ငယ်ငယ်ကနေခဲ့ဖူးတော့... မိတ်ဆွေသူငယ်ချင်းတိုးတာပဲဆိုပြီး... မြို့နာမည်လေးကြောင့်နဲ့ ကျနော်လက်ခံလိုက်ပါတယ်...။ နောက် သူနဲ့ကျနော် စကားစပြောတော့ သူကလဲ သူကိုယ်သူ ကျနော် ကျနော်နဲ့ပြောနေတာဆိုတော့ အော်...ယောကျာင်္းလေးတစ်ယောက်ပဲဆိုပြီး ကျနော်လဲ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ကိုယ်ထက်တော့ငယ်မှာပဲဆိုပြီး ကိုယ်နဲ့မင်းနဲ့ပဲပြောဆိုနေခဲ့တယ်....။ သူနဲ့ ပြောပြီး သုံးရက်လောက်နေမှ ကျနော်သိလိုက်ရတာ... သူကချာတိတ်မလေးတစ်ယောက်ပါတဲ့...။
ဒီလိုပဲ အစပိုင်းကတော့ သူ့အကြောင်းကိုယ့်အကြောင်း ပြောပြီး သူငယ်ချင်းတွေဖြစ်ကြပေါ့....။ သူ...ကျနော့်ထက် ဆယ်နှစ်ငယ်တယ်..။ ဘာရယ်မဟုတ်ဘူး... သူ ကဗျာတွေရေးတဲ့ အကြောင်း သီချင်းတွေရေးတဲ့အကြောင်းကျနော့်ကိုပြောပြတယ်...။ ဒါမဆန်းပါဘူး... ကိုယ်ဝါသနာပါရာ ကိုယ်လွတ်လပ်စွာ လုပ်ပိုင်ခွင့်ရှိကြတာပဲ...။ ပြီးတော့ ခုခေတ်လူငယ်လေးတွေက ကျနော်တို့ခေတ်ကနဲ့ အများကြီးကွာသွားပါပြီ... လုပ်နိုင်တဲ့ အခွင့်အလမ်းက အများကြီးပဲလေ...။ ကျနော့်ကလဲ စာပေ၀ါသနာပါသူမို့ ကောင်မလေးနဲ့ စကားပြောရတာ အဆင်ပြေနေတာပေါ့...။ ပိုပြီးအဆင်ပြေတာက ခုသူတို့တွေသုံးနေကျ မြန်ဂလိခ်ျဆိုလား အဲဒါမျိုး စာနဲ့သူကကျနော်နဲ့မပြောလို့တော်ပါသေးတယ်...။ ကျနော်ကလဲ မြန်မာလိုရိုက်တယ် သူလဲတော်တော်ကျွမ်းကျင်ပါတယ်... အဲဒါနဲ့ ကျနော်တို့နှစ်ယောက်ရဲ့ ကွန်မျူနီကေးရှင်းက အဆင်ပြေချောမွေ့နေတာပေါ့ဗျာ..။
ကျနော် အွန်လိုင်းသုံးတိုင်း ရှားရှားပါးပါး ကျနော့်ရဲ့စကားပြောဖော်က ဒီချာတိတ်မတစ်ယောက်တည်း ရှိတာကိုး...။အချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှမမြင်နိုင်တဲ့သံယောဇဉ်တွေရှိလာပါတယ်...။ ကျနော့်အသက်အရွယ် နဲ့တောင် ဒီလိုခံစားမိရင်ကျနော့်ထက် အသက်ဆယ်နှစ်ငယ်တဲ့ ကောင်မလေးရဲ့ ခံစားမှု ဘယ်လိုရှိမလဲဆိုတာ ခန့်မှန်းမိပါတယ်...။ ဘာကြောင့် တဒင်္ဂသာယာမှုတစ်ခုအတွက်နဲ့ ကျနော် ကျေနပ်နေမိသလဲ..။ တကယ်ဆို ကောင်မလေးက ကျနော့်ရဲ့ ထိန်းချုပ်မှုမဲ့တဲ့စိတ်အတွက် ဓါးစားခံဖြစ်ရရှာတာပါ...။ ကျနော့်ညီမအငယ်ဆုံးထက်တောင် ငယ်တဲ့ ကောင်မလေးကို အိပ်မက်ရှည်တွေပေးသလိုဖြစ်နေပြီ...။ ကျနော်ဒီလို တွေးမိချိန်မှာတော့ သူနဲ့ ကျနော် စကားပြောကြတာ ခြောက်လလောက်ရှိသွားပြီ..။ အဲဒီအတောအတွင်း ကျနော်တို့ အပြင်မှာ သုံးကြိမ်တိတိဆုံဖူးပြီးသွားပြီ...။ ပထမဦးဆုံးကော်ဖီဆိုင်တစ်ခုမှာပါ..။ အွန်လိုင်းမှာ ကျနော့်ကို ကိုကြီး.... ကိုကြီးနဲ့ ရွှန်းရွှန်းဝေနေအောင် စကားပြောတတ်ပေမယ့် တကယ်အပြင်မှာ တွေ့တော့သူစကားသိပ်မပြောဘူး...။ ပထမဆုံးကြိမ်မြင်ဖူးတာဆိုတော့ သူစိမ်းနေတာလဲ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်...။ အသားညိုညို ဆံပင်ခွေခွေ ပိန်ပါးပါး ကလေးမလေးမှာ သိပ်လှတဲ့ အညိုရောင်တောက်တောက်မျက်ဝန်းတစ်စုံ ပိုင်ဆိုင်ထားတာတော့ သတိထားမိလိုက်တယ်...။ ဒုတိယ ...ကျနော်တို့တွေ့ဖြစ်တာ ပန်းချီပြပွဲတစ်ခုမှာပါ...။ ကျနော့် မိတ်ဆွေ ပန်းချီဆရာရဲ့ ပြပွဲလေးပါ...။ အနုပညာဝါသနာပါတဲ့သူ့ကို စိတ်ဝင်စားမယ်ထင်ပြီး လေ့လာစေချင်တဲ့ စိတ်စေတနာနဲ့ ကျနော်သူ့ကိုခေါ်လိုက်တာ...။ နောက်ဆုံးတစ်ကြိမ်ကတော့ ကျနော့်မွေးနေ့မှာ... စောစောစီစီး ကျနော့်ရုံးရှေ့မှာ လက်ဆောင်လာပေးတုန်းက...။
သူ့လက်ဆောင်က အသိတရားမဲ့နေတဲ့ ကျနော့်ကို အိပ်မက်ကလန့်နိုးစေခဲ့တယ်...။ သူ့ရဲ့ခိုင်မာနေတဲ့ ကြိုးမျှင်တွေကို ထင်းခနဲမြင်စေခဲ့တယ်...။ ကောင်မလေးကို ကျနော်လှည့်စားနေမိသလား...။ ကျနော့်မှာ မေးခွန်းတွေသာ မျိုးစုံထွက်လာပေမယ့် အဖြေကရှိမနေခဲ့ဘူး...။ ကျနော်ဟာ အိမ်ထောင်သည်တစ်ယောက်ပါလို့ ဘာကြောင့် ကျနော်တို့စကားပြောခဲ့တဲ့ ကာလပတ်လုံးမှာ ဆက်စပ်ပြီးတော့မပြောမိခဲ့သလဲ...။ ကျနော့်ကိုယ်ကျနော်... မရိုးသားရာကျသွားပြီလို့သုံးသပ်မိသွားတယ်...။ တစ်စုံတစ်ခုကို ဖေါက်ပြန်မိပြီလို့ ကျနော်ခေါင်းစဉ်မတပ်ချင်ပေမယ့်...အဲဒီလောက်နီးနီး ခံစားမိနေတယ်..။ ကောင်မလေးပေါ် ကျနော် မရိုးသားတဲ့စကားလုံး အမူအရာပြခဲ့ဖူးသလား...။ ဟင့်အင်း....ကျနော်သူ့ကို ညီမလေးတစ်ယောက်ထက် မပိုခဲ့ပါဘူး..။ သေချာပါတယ်...။ ဒီလိုဆို ချက်ချင်းကြီး အစိမ်းလိုက် သူ့ကိုဖြတ်ချပစ်ဖို့ဆိုတာဖြစ်နိုင်ပါ့မလား...။
ကျနော်ဟာ...ဇနီးမယားနဲ့ ကလေးတစ်ယောက်ရဲ့ဖခင်ပါလို့...ခုချိန်မှာ သူ့ကိုပြောလိုက်ရင် အရှေ့ပိုင်းမှာ ကျနော်သူ့ကို တလျှောက်လုံး လိမ်ခဲ့တယ်လို့ သူသည်းသည်းထန်ထန် တော်တော်ကြီးစိတ်နာ ခံစားသွားလိမ့်မယ်..။ ကျနော်မ၀န်ခံခဲ့ရတဲ့ အပြစ်ဟာ သူ့ဘ၀တစ်သက်လုံးအတွက် အဲဒီလှည့်စားမှုကြီးက သူ့ကိုအချိန်တိုင်း ခြောက်လန့်မနေစေချင်ဘူး...။
ဒါကြောင့်ဘာအပြစ်မှမရှိတဲ့ ကောင်မလေးကို ကျနော့်တစ်ယောက်တည်းကြောင့်နဲ့ ဘာအကြောင်းပြချက်မှ မရှိဘဲ..စိမ်းပျပ်စွာ အဆက်သွယ်ဖြတ်လိုက်ဖို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်...။ သူ့ ဂျီတော့ကို ကျနော်ဘလောက် လုပ်လိုက်တယ် ...။ ကျနော့်ကို မေးလ်ကတဆင့် သူနားမလည်စွာ ဘာကြောင့်ဒီလိုလုပ်သလဲ အခါခါမေးတယ်..။ ကျနော်အကြောင်းမပြန်ဘူး...။ ဖုန်းဆက်လဲ ရှောင်နေလိုက်တယ်...။ စိတ်တော့မကောင်းပါဘူး...။ ဒါဟာ ရေရှည်အတွက် ကောင်မလေးရှေ့လျှောက်ရမယ့်ဘ၀လှဖို့အတွက် အများကြီး အထောက်အကူဖြစ်စေဖို့ပါ..။ သူ့ခံစားချက်ကို ကိုယ်ချင်းမစာလို့မဟုတ်ပါဘူး....။ ကျနော့်ဟာ သူလျှောက်မယ့်လမ်းမှာ ဆူးခလုတ် မဖြစ်သင့်ဘူးလေ...။ ကောင်မလေးရေ... ကိုယ့်ကိုနားလည်ပေးပါလို့ မတောင်းဆိုရက်ပါဘူး...။ ဒီကစားပွဲမှာ မင်းနဲ့ကိုယ်က ပြိုင်ဘက်တွေမှမဟုတ်ကြတာ...။ ပြီးတော့ မင်းဟာ ကိုယ့်အတွက် ကစားစရာ ဖြစ်ခဲ့သလား မဖြစ်ခဲ့ဘူးလားဆိုတာ မင်းရဲ့ ကိုယ့်အပေါ်နာကျည်းမုန်းတီးတဲ့ စိတ်မှာပဲမူတည်ပါတယ်...။ တကယ်တော့ ကိုယ်ဟာ ခွင့်မလွှတ်သင့်တဲ့ အပြစ်ကြီးကြီးနဲ့ လူတစ်ယောက်ပါလေ....။
“ ခင်ဗျားကြီး အသက်မငယ်တော့ဘူး ခင်ဗျားပျင်းတဲ့အချိန်
သူဆီက နောက်ဆုံးမေးလ်နဲ့ ရောက်လာခဲ့တဲ့ အနီရောင်စာလုံးကြီးကြီးတွေနဲ့စာကြောင်းပါ....။
ကလေးငယ်လေးတွေပုံက သိပ်ကိုဖြူစင် အပြစ်ကင်းပါတယ်....။ အသက်ကြီးတဲ့ အချိန်မှာ ကစားရင်တော့ ရလာဒ်မကောင်းတတ်ပါဘူး....။ ပုံလေးဟာ ဒီပို့စ်နဲ့ ဆန့်ကျင်ဘက် ဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်........
Posted by Cameron at 21:05 13 comments: